Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa kala gaaray gumaysi kalkaalkii isa soo maqiiqay iyo JOKA
Maxaa kala gaaray gumaysi kalkaalkii isa soo maqiiqay iyo JOKA
Posted by ONA Admin	/ April 28, 2011
Waxaa maalinta shalay oo bishu ahayd 27/04/2011 la burburiyay shir ay soo qaban qabiyeen sedex qaybood oo kala ujeeda ah. Shirka waxaa biyaha isu makhuursanaa Ajo gudhay oo afka baarkiisa tusaysay koox la iska soo hormariyay markii lagu soo hagaagi waayay wadanka Koonfur Afrika iyo jaaliyadda joogta, kooxdaa la’iska soo hormariyay oo badankood ahaa kuwa beerta ku jira ( waa kuwa qayila) oo magac iyo karaamo toona aan bulshada ku dhex lahayn iyo jaawaasiistii hore oo meesha laga saaray. Kooxdan dambe ayaa iyagu ku andacoonaya in ay u soo halgameen jaajiuusnimada. Labada koox ayaa waxaa lagu dhex dhexaadiyay in bal shir la qabto oo siduu doonaba ha ahaadee loogu talagalayo in looga heelo bogaadin dhinac gumaysiga oy waxba ku biirin la’ayihiin Koonfur Afrika.
Shirkan ayaa waxa loo diyaarinyay hab dhabar ka taabasho ah si aan loo ogaanin, waxaana dadka loogu yeedhay qado ayaa la’idiin qaban ileen dadku si kale uguma imanayaanee.
Goobtu waxay hayd hotelka loo yaqaano Bismillaha. Waxaa goobta tagay xoogaa aan badanay oo ninba nin soo jiiday, hase yeeshe waxaa ka war helay jaaliyadda Ogaadeenya ee Koonfur Africa oo goobtii u dirsatay hal falaadh ah midaas oo soo gababaysay shirkii kadib kolkii mid meesha ka kacay uu ku hadaaqay erayaddii bakhti fuulka Jigjiga taasoo loo hal celiyay. Waxay sidii jiir bisadi qabatay, ay dhaqaajin kari waayeen beentii ay doonayeen inay ka gadaan jaaliyadda, ka dibna inta la is eeg eegay ayuu midba meel uu ka baxo raadsaday. Waxaa markiiba goobta yimid dhaliyarada jaaliyadda iyadoo markay kooxdii meesha dadka isugu yeedhay arkeen bilaabay in ay afka isa saarsaaran badhkoodna ayba fadhigii xamili kari waayan. Waxa bilaamay gaala bax kola ay dibada fiirinayaan kollla ay soo arinsanayaan, iyagoo aad moodo in ay yihiin qof raran ku taagan oo kale.
Waxaa xusuus mudan in ninka la yidhaado qorane oo hadda loo bixiyay Qodax uu damcay in loo yeedho police midaas oo loo sheegay in aanay meesha wax rabshada ah ka jirin loona baahnayn in police yimaado, wuxuuna goobtii ka dhaqaay isagoo qadaad weyn. waxaa iyaguna goobta markii ay arkeeen xubanha jaaliyadda oo xaadir ku ah meesha ka baxay kuwo ka mid ahaa kuwii la soo dhoofiyay iyo qaar loo yeedho markii loo baahdo oo dareemay sansaan colaadeed.
Kooxda la soo dhoofiyay waxaa la yimaadeen South Africa wax loo yaqaano moradqaad oo ah – waxaa samee waxan ayaan ku siin – taas oo gorgortanka gumaysiga lagu yaqaano.
Waxaa kaloo tusaale mudan in maalmihii u danbeeysay ay dad dhalinyaro ah isku dayeen inay la kulmaan iaygoo u sheegey in haddii ay la howlgalaan lacag la siin doono markuu dhamaado howlgalka ay u socdaan midaas oo ah tabaha cadawgu ee soo daashaday bulshada Ogaadeenya .
Wixii ka soo kordha waan idin socodsaaiin doona.
www.dogs3.com/blog - Whats up with the cavalier king charles spaniels and their birding instinct? says:
[…] Maxaa kala gaaray gumaysi kalkaalkii isa soo maqiiqay iyo JOKA … […]
in indhaha loo shido ayey ahayd duligaas Jaajuusiinta ah…